Mpanamboatra sy mpamatsy mpamatsy - China ATTACHMENTS Factory
BONOVO milina fanodinam-pahefana vita amin'ny simenitra ho an'ny tany
Bonovo Hydraulica Concrete Crushers dia ampiasaina amin'ny fandravana voafehy ny beton sy ny beton nohamafisina miaraka amin'ny fametrahana mazava tsara, hery, tsy dia mitabataba sy hovitrovitra noho ny fitaovana misy akony. Tena mandaitra izy ireo amin'ny fototra, rindrina ary hazo. Izy ireo dia mitaky loharanom-pahefana elektrika ambany na tsindry kely hiasa.
BONOVO OEM servisy pulverizer simenitra mekanika ho an'ny orinasa mifamatotra
Ny bokotra mekanika vita amin'ny mekanika Bonovo dia manorotoro mora foana amin'ny beton nohamafisina ary manapaka ny firafitry ny vy maivana mamela ny fitaovana hisaraka sy hamerina, ary miaraka amin'izay, mamela ny fikirakirana fitaovana mora kokoa. Mandaitra amin'ny rindrina vita amin'ny beton nohamafisina sy tsy nohamafisina ary ny masonry, valindrihana, tsanganana, tohatra ary faritra mivaingana rehetra.
BONOVO tsy mahazaka akanjo CW SERIES mandavaka siny ho an'ny mpitrandraka
BONOVO dia manolotra tsipika siny feno ho an'ny mpitrandraka. Ity tsipika pin-on sy Hinges ho an'ny boaty CW Coupler dia manasongadina endrika tsara kokoa hanararaotana ny herin'ny milina mihamitombo.
BONOVO s bucket excavator azo ampiasain'ny S SERIES ho an'ny tetikasa fihadiana
Misy karazana siny Bonovo rehetra.
Bonovo dia mitahiry siny sy kofehy feno miaraka amina fonosana "S" ao anaty tahiry izao.